Kooxaha Barcelona, PSG iyo Manchester United ayaa gaaray guulo muhim ah tartanka Champions… – Hagaag.com
Posted on 29 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi iyo saaxiibadiis waxay ku fureen guul iscailaadii madaxweynaha Naadiga Josep Maria Bartomeu iyagoo bandhig xoog leh ku sameeyay bannaanka garoonkooda, Barcelona ayaa guul qaali ah oo labo gool ah ka gaartay kooxda martida loo ahaa ee Juventus wareega labaad ee group-ka toddobaad ee wareega koowaad ee UEFA Champions League, sidoo kale waxaa wada ciyaaray Dynamo Kiev oo reer Ukraine ah oo marti u aheyd kooxda reer Hungary Ferencváros 2-2.
Group sideedaad, Kooxda Manchester United ayaa sii wadatay bilowgeeda quruxda badana ee tartanka qaaradda, iyadoo gaartay guusheedii labaad ee heerka guruubyada, ka dib guushii weyneyd ee ay shan gool oo nadiif ah ka gaartay Leipzig, iyadoo sidoo kale Paris Saint-Germain ay labo gool oo nadiif ah uga badisay kooxda ay martida u aheyd ee Turkiga ee Basaksehir.
Garoonka “Allianz Turin”, Barca ayaa ciyaartay kulankoodii ​​ugu horeeyay ee waayaha cusub ka dib markii uu is casilay madaxweynihii muranka dhaliyay, kaasoo la wareegay madaxtinimada kooxda Catalan laga soo bilaabo Janaayo ilaa iscasilaadiisa Talaadadii la soo dhaafay ka dib xilli adag oo u horseeday uruurinta in ka badan 20 kun oo saxiix oo ka yimid xubnaha kooxda si loogu sameeyo codbixin kalsoonida lagala noqdo Bartomeu iyo guddigiisa.
Messi iyo asxaabtiisa ayaa soo bandhigay bandhig adag iyagoo isku dayaya inay tirtiraan saameynta guuldaradii 1-3 ee Real Madrid Sabtidii hore kulankii ugu horeeyay ee El Clasico ee xilli ciyaareedkan.
Labada gool ee guusha ee Barca ayaa kala dhaliyey Othman Dembli (13) iyo Messi daqiiqadii ugu horreysay ee waqtiga dhimashada gool rigoore ahaa, kaasi oo noqonayo goolkiisii ​​ugu horreeyay ee uu kaga dhaliyo Juventus gurigooda intii ay jirtay taariikhda iska hor imaadka labada kooxood, wuxuuna Messi sare u qaaday goolashiisa oo uu ka dhigay 120 gool oo horyaalka Yurub ah.
Barca ayaa sare u qaaday dhibcaheeda ilaa 6 dhibcood oo ay ku hogaamineyso guruubka, Juventus ayaa ku dhegen 3 dhibcood oo kaalinta labaad ah.
Garoonka “Old Trafford”, Man United ayaa ku xasuuqday martidooda Jarmalka shan gool, waxaana u kala dhaliyay Mason Greenwood (21), Marcus Rashford (74, 78, 92) iyo Anthony Martial (87 rigoore).
Kooxda “Red Devils” ayaa hogaanka ku haysa 6-dhibic, oo keli ku ah hogaanka group-kan, halka Paris Saint-Germain ay ku jirto kaalinta labaad iyadoo leh seddex dhibcood, iyadoo ka horeysa keliya Leipzig farqiga goolasha, halka Basaksehir ay weli ku jirto halka ugu hooseysa kala horeynta iyadoo aan wax dhibco ah laheyn.